အိုင်းစတိုင်းသည် စကြဝဠာကြီး ရပ်တည်နေသော သဘောဘက်သို့ တိမ်းညွတ်သည်။ ထိုသို့ တိမ်းညွှတ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လည်း သူသည် (Cosmological Constant) ကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် တကယ့်အခြေအနေ၌မူ စကြဝဠာကြီးသည် ပြန့်ကားလျှက်ရှိသည်။ ဤသို့ ပြန့်ကားကြောင်းကို လက်တွေ့ သက်သေ မြင်တွေ့ရသောအခါ အိုင်းစတိုင်းသည် သူ၏ စကြဝဠာ ရပ်တန့်နေမှုကို လက်လျော့ခဲ့ရသည်။ ဤအကြောင်းကို ဟော့ကင်းသည် သူ၏ (Black Holes and Baby Universes) စာစု၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြခဲ့ဖူးသည်။
(Einstein originally proposedavery small cosmological constant in the hope of balancing the tendency of matter to make the universe contract. That motivation disappeared when it was discovered that the universe is expanding.)
ဤကား ဟော့ကင်း၏ စကြဝဠာ ပြန့်ကားမှုကို ဖွင့်ဟချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် စကြဝဠာ ပြန့်ကားနေကြောင်း သိလျှင်သိခြင်း သူ၏ စကြဝဠာ တည်တံ့ရပ်နေမှုကို လက်လျော့ခဲ့သည်။ (Quantum Mechanics) ကို လေ့လာရင်းဖြင့် သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ခုသော ကောက်ချက်ချသည်။ ထို ကောက်ချက်ကို ဟော့ကင်းသည် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
( — their presence means that we will be able to predict less than we expected, –) ဟူ၍ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျွန်တော်တို့က အနာဂတ်ကို ကြိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ထက် လျော့နည်းစွာပဲ အမှန်အကန် ကြိုပြောနိုင်လိမ့်မည်ဟု တင်ပြခဲ့သည်။ သ်ို့သော် ​ဤကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတို့သည် သုတေသန၏ လွန်စွာ ရင်ခုန်ဖွယ်ရာကောင်းသော စမ်းသပ်ချက် တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်ဟုတော့ ဟော့ကင်းက ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
ဤ အကြောင်းအရာများကို ဟော့ကင်းသည်သူ၏ (Black Holes and Baby Universes) စာစု၌ ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Tags: Myanmar Posts, အိုင်းစတိုင်း, ဟော့ကင်း
This entry was posted in Buddhism and tagged Myanmar Posts, အိုင်းစတိုင်း, ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.